အစားအစာတွေ ကြာရှည်ခံအောင် ထည့်သုံးနေကြတဲ့ ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ – Burmese Online News
ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ…
ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Q. ဖော်မလင်အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။
A. ဖော်မလင်ဆိုတာ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (formaldehyde)၊ မက်သနော (methanol)၊ ရေ (water) စုပေါင်းထားတဲ့ အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖော်မလင်အရည်မှာ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။
Q.. ဖော်မလင်ကို သဘာဝအားဖြင့် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာမ။
A. ဖော်မလင်ကို အဓိကအားဖြင့် လူသေတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် စိမ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ပြီးတော့- ပိုးသတ်ရာမှာ သုံးပါတယ်၊ ကြမ်းခင်းတွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ၊ သဘောင်္တွေနဲ့ သိုလှောင်ရုံတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးတွေ၊ ယင်ကောင်တွေ နှိမ်နင်းရာမှာသုံးပါတယ်။ ပိုးချည်၊ ဆိုးဆေး၊ မှန်နဲ့ ဖောက်ကွဲပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ ရေမွှေးပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ လျှပ်ကာပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ အထပ်သားတွေ ကပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်…
Q. အခုအခါမှာ ဖော်မလင်ကို အစားအသောက် တွေမှာတာရှည်ခံအောင် သုံးနေကြတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါ ဆရာမ…..?
A. ဖော်မလင်ကို အစားအသောက်တွေမှာ တာရှည်ခံပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ ဖော်မလင်ကိုတာရှည်ခံပစ္စည်းအဖြစ် လွဲမှားစွာအသုံးပြုတတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့- အသား၊ ငါး၊ Seafood ခေါ် ပင်လယ်စာတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး စတဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ Tofu/ ပဲပြား၊ ပဲသွေး၊ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် စတာတွေဖြစ်ပါတယ်….
Q. ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးမိရင် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာမ။
A. ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသုံးမိတာကြောင့် ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မြောခြင်းနဲ့ အခန့်မသင့်ရင် သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက်ကိုရေရှည် စားသုံးမိတာကြောင့်…. ကျောက်ကပ်၊ အသည်းအစာအိမ်၊ အဆုတ်တို့ ပျက်စီးခြင်း၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာ၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ သွေးကင်ဆာတို့ ဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖော်မလင်ပြဿနာက မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘဲ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဟောင်ကောင်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး အရေးယူနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်…
Q. အစားအသောက်တွေမှာ ဖော်မလင် ပါ၊ မပါ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ဆရာမ…?
A. ငါးဆိုရင် ဖော်မလင်ပါတဲ့အခါ အသားက ရာဘာလို မာမာတောင့်တောင့်ဖြစ်နေမယ်၊ အကြေးခွံကမာနေမယ်၊ ငါးညှီနံ့မရဘူး၊ ယင်မနားဘူး။ ပင်လယ်စာဆိုရင်ရာဘာလိုမာပြီး ဖြူနေမယ်၊ အနံ့မရှိဘူး။ ကင်းမွန်ဆိုရင် အရမ်းမာပြီး ဓားနဲ့ဖြတ်မှ ပြတ်နိုင်တယ်။ Tofu/ပဲပြားဆိုရင်ပျော့မနေဘဲ မာမာတင်းတင်းဖြစ်နေမယ်။ ၂၄ နာရီ ကျော်ရင်လည်း မပျက်စီးဘူး။ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ဆိုရင် ပျော့ပြောင်းမနေဘဲ အီလက်စတစ် (Elastic) လို ဖြစ်နေမယ်။ ရေနွေးထဲထည့်ရင် ဆေးနံ့လိုလို၊ ပြာ (Ash) နံ့လိုလို ရနေမယ်…
Q. စားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေကို ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအကြံပြုချက်တွေကို ပေးလိုပါသလဲ ဆရာမ…?
A. ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (Formadehyde) က ရေမှာ ပျော်ဝင်ပြီး အပူပေးရင် အငွေ့ပြန် ပျောက်ကွယ်နိုင်တာကြောင့် အသီးတွေကို မစားခင် တစ်နာရီခန့် ရေစိမ်ထားပါ။ အသီးအရွက်တွေကို မချက်ပြုတ်ခင် ဆားရေနဲ့ အချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့် စိမ်ပြီးမှ ချက်ပါ။ ငါးဆိုရင် ဆားရေထဲမှာတစ်နာရီ စိမ်ထား ရင် ဖော်မလင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖယ်နိုင်တယ်၊ ရှလကာရည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း (Vinegar 90%)ပါတဲ့ ရေထဲမှာ စိမ်ရင်တော့ ဖော်မလင်ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…